Fandefasana fiara avy amin'izao tontolo izao ho any UK | Ny fanafarana ny fiarako
EU mankany Angletera
Etazonia mankany Angletera
Ny sisa amin'izao tontolo izao mankany Angletera
Mividiana fiara avy any UK any NZ
Famerenam-bola amin'ny fiara
Fandefasana fiara mankany UK
Ny vidin'ny fandefasana
EU any UK
Fisoratana anarana DVLA
Fitsapana momba ny fiara UK
Fandefasana fiara avy amin'izao tontolo izao mankany UK
Ny Fiaramanidin'ny Fiarako dia nandray anjara tamin'ny indostrian'ny fanafarana fiara any Angletera nandritra ny 25 taona lasa. Ny tanjonay amin'ny maha orinasa anay dia ny manolotra ny mpanjifa manafatra fiara any Angletera safidy iray hafa mora azo raha tsy maintsy raisin'izy ireo irery ny fizotrany.
Izahay dia nanangana ny orinasanay amin'ny fahazoana fa ny fahatsinjovana ny fanafarana fiara mankany UK dia mety hampivadi-po ny olona manatona azy voalohany. Fantatray fa ny fampahalalana amin'ny antsipiriany takiana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hanafatra fiara any UK dia matetika miely sy sarotra levona ka eto izahay hanampy sy ho loharano tokana anao.
Mino izahay fa amin'ny alàlan'ny fanankinana ny fanafarana ny fiarako amin'ny fiara dia azonao atao ny mipetraka sy miala sasatra mandritra ny ampiasainay ny orinasanay manerantany amin'ny tamba-jotra ara-barotra, ny fahalalana eo amin'ny indostria ary ny toeram-pitsapana any UK mba hamerenanao ny fiara sy ny fiarany amin'ny fomba mahomby. ny lalana eto UK.
Aiza no ahafahantsika misambotra?
Manana traikefa lehibe amin'ny fandefasana fiara avy amin'ny firenena maro samihafa manerantany isika. Azonao atao ny mahafantatra bebe kokoa ny fizotran'ny fanafarana manokana avy amin'ny toerana sasany malaza eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny iray amin'ireo pejy mifandraika etsy ambany.
Ny tombony azo avy amin'ny fisafidianana ny My Car Import hanafatra ny fiaranao avy any ivelan'ny EU na USA mankany UK dia:
Ny ekipa voatokana eo an-toerana ao amin'ny firenenao handray ny fiara sy hikarakara ny fanadiovana fanondranana
Ny fitoeran-tseranana na ny Roll on Roll off options avy amin'ny seranan-tsambo lehibe manerantany
Fahazoan-dàlana any UK
Fiomanana fitsapana fiara ho an'ny fenitra IVA
Tsy manam-paharoa amin'ny fanandramana navoakan'ny indostrialy IVA sy MOT izay nankatoavina
Raiso haingana ny fisoratana anarana DVLA amin'ny alàlan'ny mpitantana kaonty natokana ho anay
Fanaterana any an-trano raha ilaina
IZANY IANAO MIASA
Tsindrio eto raha hahazoana teny nalaina
Avy aiza ianao no manafatra?
Hihaona amin'ny ekipa Jack
Charlesworth Tale mpitantana hanao
Smith Talen'ny varotra Vikki
Walker Tale Mpanatanteraka Steven
Chapman Serivisy ho an'ny mpanjifa Joseph
Marineo Mpandrindra fiara Ryan
O'Meara Administrator Nastya
Akatona ny atolotray anao
Makà teny nindramina mba hanafarana ny fiaranao amin'ny My Car Import
Ny fampidiran'ny Fiarako dia nahavita nanao fampidirana fiara an'arivony hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Na aiza na aiza no misy ny fiaran'izao tontolo izao, dia ho azonay atao ny mandray an-tanana ny dingana rehetra amin'ny fanafarana sy ny fisoratana anarana. Izahay dia manana tambajotram-pifandraisana manerantany manerana ny kaontinanta rehetra hanome anay fahalalana sy fahatokisana eo an-toerana na aiza na aiza no misy ny fiaranao.
Izahay ihany no mpanafatra fiara any Angletera nahavita nanambola be dia be tao amin'ny toeram-pitsapana neken'ny DVSA ho an'ny tranonkalantsika. Midika izany fa ireo mpanara-maso DVSA dia mampiasa ny lalam-panadinana eo an-toerana hamoahana ny karazana fankatoavan'ny tsirairay ny fiaran'ny mpanjifanay. Miaraka amin'ny fisianay manerantany sy ny fanoloran-tenantsika mitohy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanarahan-dalàna UK, izahay no mpitarika ny tsena eo amin'ny sehatra misy antsika.
Kitiho ETO HAHAZO FITENY
Aza mahita an'ity hafatra ity intsony
Makà teny notsongaina hanafarana sy hisoratra anarana ny fiaranao any Angletera?
Ny Car Import dia nahavita nanao fisoratana anarana ho an'ny fiara nafarana an'arivony. Na aiza na aiza no misy ny fiaran'izao tontolo izao, dia ho azonay atao ny mandray an-tanana ny dingana rehetra amin'ny fanafarana sy ny fisoratana anarana.
Miaraka amin'ny fisianay manerantany sy ny fanoloran-tenantsika mitohy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanarahan-dalàna UK, izahay no mpitarika ny tsena eo amin'ny sehatra misy antsika. Na manafatra ny fiaranao manokana ianao, manafatra ara-barotra fiara maro, na manandrana mahazo fankatoavana karazana volavola ambany ho an'ny fiara amboarinao, manana ny fahalalana sy ny fotodrafitrasa izahay hahavitana ny zavatra takinao rehetra.
Aza misalasala mameno ny fangatahana fangatahana teny nindramina mba hahafahanay manome teny nalaina ho fampidirana ny fiaranao mankany amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Tsindrio eto raha hameno ny fangatahana fangatahana teny nalaina
Tsia misaotra, tsy liana aho!